विदेशमा तरिकाहरू र सुझावहरूको अध्ययन गर्दै – Vocre
विदेशमा तरिकाहरू र सुझावहरूको अध्ययन गर्दै
विदेशमा अध्ययन एक अविस्मरणीय अनुभव हो. यति धेरै कि तपाईं सायद एक महान समयको बारेमा चिन्तित हुनुहुन्न. अझै, विदेशमा अध्ययन पनि क्रूर स्वामिनी हुन सक्छ - त्यहाँ असंख्य चीजहरू छन् जुन सजिलैसँग तपाईंको शैलीमा क्र्याम्प राख्न सक्छ. यी सुझावहरू पालना गर्नुहोस् घरबाट टाढा हुनको लागि.
विदेश डोस र नगर्नुहोस्को अध्ययन
गर्नुहोस् सकेसम्म धेरै मानिसहरूलाई भेट्ने प्रयास गर्नुहोस्; आराम र विश्रामको लागि केहि समय तालिका बनाउन नबिर्सनुहोस्.
गर्नुहोस् तपाईंको गन्तव्य देशको लागि खाना पकाउने प्रयास गर्नुहोस्; घरबाट खानेकुरा खाएर तपाईको यात्रामा खर्च नगर्नुहोस्.
गर्नुहोस् तपाईंको गन्तव्य देशको भाषा सिक्ने प्रयास गर्नुहोस्; तपाईंको पूरा वर्ष विदेशमा तपाईंको कोठामा अध्ययन नगर्नुहोस्.
गर्नुहोस् सुरक्षित रहन सामान्य ज्ञान प्रयोग गर्नुहोस्; तपाईको सम्पूर्ण यात्रा प्रत्येक सानो चीजको बारेमा चिन्ता नगर.
गर्नुहोस् जब तपाईंलाई आवश्यक पर्दछ मद्दतको लागि सोध्नुहोस्; तपाईंको सुविधा क्षेत्र बाहिर जानु हुँदैन.
सम्भव भएसम्म धेरै व्यक्तिहरूलाई भेट्नुहोस्
आधा कारण विदेश पढ्न को लागी हो धेरै नयाँ व्यक्तिलाई भेट्नुहोस् सकेसम्म. तपाईं विश्वको आधा बाटोमा यात्रा गर्न चाहनुहुन्न (वा विश्वको अर्को तर्फ) तपाईंको छात्रावासमा तपाईंको समय मात्र खर्च गर्न, watching “Game of Thrones.”
सम्भव भएसम्म धेरै गतिविधिहरूको लागि साइन अप गर्नुहोस्. Try to meet as many people as possible from other countries.
भनिएको भइरहेको छ, आफैलाई जलाउनु हुँदैन, या त. आफ्नो ब्याट्री रिचार्ज गर्न केहि डाउनटाइम अनुसूची गर्न नबिर्सनुहोस्.
खानाको बारे लाज नमान्नुहोस्
हो, you’ll probably miss your favorite Italian American dish that only one restaurant in your town knows how to cook ‘just so.’ You’re going to have bizarre cravings for snacks and cereals you never even knew you liked.
नयाँ चीजहरू गर्न नबिर्सनुहोस्. तपाईंको गन्तव्य देशको राष्ट्रिय पकवान खानुहोस्. Try all the weird snacks at corner stores.
सकेसम्म छिटो भाषा सिक्नुहोस्
अध्ययन-विदेश कार्यक्रमको लागि साइन अप गर्नु अघि तपाईंले अर्को भाषामा धाराप्रवाह हुन आवश्यक पर्दैन. तर तपाईं आफ्नो गन्तव्य को भाषा सिक्न को लागी प्रयास गर्न चाहानुहुन्छ. केहि दिन मा भाषा सिक्न समय छैन? एक भाषा अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् भाषा बाधा तोड्न सहयोग गर्न.
जब यो आउँछ तपाईंको गन्तव्यमा सुरक्षित रहदै, it’s all about research.
कुन छिमेक सुरक्षित छ र कुन बेवास्ता गर्नु पर्दछ पत्ता लगाउनुहोस्. तपाईको वालेटमा टन्स नगद बोक्नु हुँदैन. मेट्रोमा तपाईंको छातीमा तपाईंको ब्याकप्याक लगाउनुहोस्. स्थानीय घोटालाहरू अनुसन्धान गर्नुहोस् ताकि तपाईं कसरी उनीहरूबाट जोगिन सक्नुहुनेछ. एक्रोन्डेड क्षेत्रहरूमा एक्लै घुमाउनुहुन्न.
तपाईं काम गर्न त्यहाँ हुनुहुन्छ बिर्सनुहोस्
विदेशमा अध्ययनको सबैभन्दा ठूलो दुर्घटनाहरू मध्ये एक बिर्सिनु छ तपाईं काम गर्न त्यहाँ हुनुहुन्छ. Failing to complete assignments and missing classes is almost too easy when you’re trying to make memories that lastalifetime.
धेरै अमेरिकी विद्यार्थीहरू पनि आफैं पहिलो पटक भेट्छन् - कानुनी पेय युग बिना देशहरूमा.
यसलाई ढिलो लिनुहोस्. रमाइलो गर्न तपाईंसँग तपाईंको सम्पूर्ण जीवन छ. तर तपाईंसँग विदेशमा पढ्ने मात्र मौका छ. द्वारा आफ्नो यात्रा को सबै भन्दा बनाउनुहोस् ध्यान केन्द्रित रहन र तपाईको अध्ययनलाई तपाईको पहिलो प्राथमिकता बनाउने.
तपाईंको यात्रा दस्तावेज
तपाइँको कागजातको मनपर्ने विधि स्नैपच्याट हो कि हैन, डायरी, एक ब्लग वा इंस्टाग्राम कथाहरू, तपाइँको यात्रा कागजात गर्न नबिर्सनुहोस्.
जबकि एक बर्ष लामो समय जस्तो लाग्न सक्छ, यो वास्तवमै धेरै लामो छैन. It will go by much faster than you expect.
यो चाहन्छन लोभ्याउने छ यात्रा को एक बर्ष को लागी तपाइँको सम्पूर्ण वार्डरोब प्याक गर्नुहोस्. जे भएपनि, तपाइँलाई एक बर्ष लायक कपडा चाहिन्छ. कसले जान्दछ जब तपाइँ तपाइँको चिनो पोशाक को आवश्यकता हुन सक्छ, sequins मा कभर. वा, तपाईंको मनपर्ने स्वेन्टप्यान्टहरू वा तपाईंको घर फर्कने स्वेटर.
सकेसम्म थोरै प्याक गर्नुहोस्. यो नबिर्सनुहोस् कि तपाई आफ्नो गन्तव्यमा पुग्दा तपाईले सँधै किन्न सक्नुहुन्छ. You can also have items shipped to you.
तपाईंको यात्राको बखत कुनै समय, तपाईंले कसैको सहयोगको लागि सोध्नु पर्ने हुन्छ. चाहे यो तपाईंको गृहकार्यमा मद्दतको लागि तपाईंको रूममेट वा संस्कृति आघात सम्बन्धी सल्लाहको लागि तपाईंको मार्गदर्शन सल्लाहकार हो, यो हुन सक्छ. मद्दत चाहिन्छ यो ठीक छ. यो शक्तिको संकेत हो - कमजोरी होइन.
अरूसँग बस्न छाँटकाँट गर्न सिक्नुहोस्
अरूसँग बस्न सिक्दै सजिलो छैन. यो घरमा भन्दा पनि कडा छ. तपाईं अन्य संस्कृति र देशका मानिसहरूसँग बस्दै हुनुहुन्छ. तपाईंको रूममेटसँग सायद तपाईंले प्रयोग गर्नुभएका भन्दा फरक रीतिथितिहरू हुनेछ. के यु एस मा अशिष्ट मानिन्छ. अन्य देशहरूमा सामान्य अभ्यास हुन सक्छ - र यसको विपरित.
अधिक लचिलो तपाईं परिवर्तन अनुकूलन मा छन्, विदेशमा बस्ने रमाइलो अंशमा पुग्न सजिलो हुनेछ.
तपाईंको लामो दूरी-सम्बन्धको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुहोस्
हामी क्लिचि हुन घृणा गर्छौं, तर तपाइँको लामो दूरीको सम्बन्ध केहि महिना भन्दा बढी नहुन सक्छ - र यसले तपाईंलाई पछाडि समात्छ. You don’t want to regret passing on bonding with your new classmates because you haveaphone date with your boyfriend or girlfriend back home.
तपाईं लामो दूरीको सम्बन्धमा पनि रहन चाहनुहुन्न किनकि किनकि तपाईंले आफ्ना सहपाठीहरूसँग मित्रता गाँस्ने मौका गुमाउनुभएको छ भनेर महसुस गर्नुहुन्छ।.
सट्टा, तपाईंको अध्ययन विदेशमा अनुभव मा पूरा ध्यान दिनुहोस्.